Aiva Wemhuri yekwaKayafasi | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uzbek Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Dzimwe nguva zvinhu zvinowanikwa nevanochera matongo zvinonyatsotaura nezvemunhu ari muBhaibheri kana kuti hama yake kana kuti mumwewo munhu ane zvaakaita naye. Somuenzaniso, muna 2011, vamwe vanamuzvinafundo vokuIsrael vakabudisa mashoko anoratidza izvozvo. Vakawana bhokisi raichengeterwa mapfupa emunhu akafa pashure pokunge nyama yaora. Bhokisi racho rainge rava nemakore 2 000 uye rainge rakagadzirwa nedombo reraimu.
Bhokisi iri rakanyorwa kuti: “Miriyemu mwanasikana waYeshua mwanakomana waKayafasi, mupristi wokwaMaaziya wokuBheti Imri.” Kayafasi ndiye mupristi mukuru wechiJudha ainge aripo paitongwa uye pakaurayiwa Jesu. (Joh. 11:48-50) Munyori wezvakaitika kare wechiJudha anonzi Flavius Josephus anomuti “Josefa, ainzi Kayafasi.” Zviri pachena kuti bhokisi iri nderehama yake. Sezvo bhokisi rakambowanikwa rinofungidzirwa kuva romupristi mukuru pachake rakanyorwa kuti Yehosef bar Caiapha, kana kuti Josefa, mwanakomana waKayafasi, * Miriam aiva noukama naKayafasi.
Maererano nezvakataurwa neIsrael Antiquities Authority (IAA), bhokisi remapfupa aMiriam rakatorerwa mbavha dzainge dzaba zvinhu muguva rekare. Kuongororwa kwebhokisi iri uye zvakanyorwa pariri kunoratidza kuti nderechokwadi.
Bhokisi iri rinotiudzawo chimwe chinhu chitsva. Rine zita rokuti “Maaziya,” boka rokupedzisira pamapoka 24 evapristi vaishumira vachiita majana patemberi muJerusarema. (1 Mak. 24:18) IAA inoti zvakanyorwa pabhokisi iri zvinoratidza kuti “mhuri yaKayafasi yaiva neukama neboka raMaaziya.”
Mashoko acho anotaurawo nezveBheti Imri. Mashoko aya anofungidzirwa kuti angangova achireva zvinhu zviviri. “Kutanga zvinofungidzirwa kuti Bheti Imri izita remhuri yevapristi, vanakomana vaImeri (Ezra 2:36, 37; Nehemiya 7:39-42) vedzinza rinosanganisira boka raMaaziya,” inodaro IAA. “Chechipiri zvinofungidzirwa kuti [Bheti Imri] inzvimbo yaigara mushakabvu uyu kana kuti mhuri yake yose.” Chero zvazvingava, bhokisi raMiriyemu rinopa uchapupu hwokuti Bhaibheri rinotaura nezvevanhu chaivo vaibva kumhuri dzaitovapo.
^ ndima 3 Nezvebhokisi remapfupa aKayafasi, ona nyaya yakanzi “MuPristi Mukuru Akawanira Jesu Mhosva” iri muNharireyomurindi yaJanuary 15, 2006, mapeji 10-13.